Wakiilka Robert Lewandowski oo Qiray in Xiddiga uu u Baahan Yahay isbadal Cusub - Wargane News
Home Sports Wakiilka Robert Lewandowski oo Qiray in Xiddiga uu u Baahan Yahay isbadal...
Wakiilka Robert Lewandowski oo Qiray in Xiddiga uu u Baahan Yahay isbadal Cusub
Robert Lewandowski ayaa laga yabaa inuu qaado wadadii uu kaga dhaqaaqi lahaa kooxda Bayern Munich kadib wakiilkiisa oo sheegay in weeraryahanka uu u baahan yahay isbadal cusub.
Dhaliyaha kooxda Bayern waxaa si weyn loola xariirinayay inuu ka dhaqaaqo garoonka Allianz Arena, xili Real Madrid ay tahay kooxda si wayn u dooneysa laakiin naadiga horyaalka Bundesliga ayaa horey u sheegtay in uusan beec aheyn qiimo walba.
Lewandowski ayaa kamida weeraryahanada joogtada ah ee ugu wanaagsan qaarada yurub sanadihii lasoo dhaafay, kadib markii uu ka caawiyay kooxda Bayern hanashada horyaalka afar sano oo xariir ah, balse majalada Bild ayaa warineysa in wakiilka laacibka Pini Zahavi uu sheegay in Lewandowski uu raadinayo isbadal.
‘Robert wuxuu dareensan yahay inuu u baahan yahay isbedel iyo tartan cusub oo mustaqbalkiisa ah,’ ayuu yiri Zahavi. “Maamulayaasha Bayern waa ay ka warqabaan.”
Lewandowski waxa uu la shaqeynayaa Zahavi tan iyo bishii February, taasina waa mida muujineysa xaqiiqda dhabta ee xiddiga ku qasbeysa inuu ka dhaqaaqo Bayern xagaagan.
“Waa sharaf weyn oo ixtiraam leh aniga ahaan inaan wakiil u noqdo oo aan ixtiraamo weeraryahanka ugu fiican adduunka” ayuu u sheegay Borek ka dib markii uu noqday Lewandowski.
Official: Qatar flights using Somali airspace
Somaliland: Runtu Ma Fanta: Heerka Koritaanka Dawladnimada Somaliland? Akhriso, Qormo Uu Qoray Aadan Muuse Jibriil